CAN 2019. Morocco - Ivory Coast iyo Senegal - Aljeeriya, naxdinta safarka 1er ... La soco barbarashada digaagga - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »XIDHIID. Morocco - Ivory Coast iyo Senegal - Aljeeriya, naxdinta safarka 2019er ... La soco barbarashada digaag
CAN 2019. Morocco - Ivory Coast iyo Senegal - Aljeeriya, naxdinta safarka 1er ... La soco barbarashada digaag
Isku aadka Koobka qaramada Afrika ee 2019 ayaa dhacay habeenkii jimcaha. Wareegga koowaad, waxaanu xaq u leenahay dhibaatooyinka qaarkood ee Morocco - Ivory Coast iyo Senegal - Algeria. Tartanku wuxuu bilaaban doonaa Juun 21 ee soo socota ee ka dhici doona Egypt, oo martigelinaysa, Zimbabwe.
Morocco - Ivory Coast iyo Senegal - Algeria noqon doontaa lama filaan ah ee wareega koowaad ee CAN-2019, halka Masar, dalka martida loo yahay, ayaa la ciyaari doonta kulanka furitaanka ka dhanka ah Zimbabwe, 21 June, sida ay aadka sawiri sameeyay Jimcihii. Mastodon oo kubadda cagta Afrika ah kula ciyaari doona 7 CAN, oo uu ku jiro seddex gurigiisa, Masar ayaa sidoo kale ka hor imaan doonta DR Congo iyo Uganda Group A.
Haddii Mohamed Salah uu saaxiibadiisa ka mid yahay, dhamaadkii koobkii ugu danbeeyay ee koobkii ugu dambeeyay, wuxuu lahaa barbaro aad u liidata, kuwa kale ee ugu cadcadaa guusha kama dambeysta ah waa inay la dagaalamaan xilli hore oo ay booqanayaan 1er.
The Morocco Herve Renard heli ka wareega group-yada ee Côte d'Ivoire ah, sida in 2017, ee Group D, halka Senegal, kuwaas oo ku riyoodaa in ka 1er dabaaldega ah ka gaartay 17 sano ka dib 2002 nasiib darro final, jareyso wadada Algeria ee Group C.
Taa bedelkeeda, Cameroon, oo haysta horyaalka, ayaa ka soo horjeeda Ghana, Benin, iyo Guinea-Bissau ee Group F.
Koobka waddanka ayaa martigelin doona markii ugu horeysayMar kale kooxo 24 xagaaga (21 June-19 July), halkii ay ka heli lahaayeen kooxo 16 qaabkii hore.
CAN 2019: Ghana, Benin iyo Guinea Bissau oo ku yaala Libaaxyada Indomitable Mirror
Minnesota United waxay siineysaa MLS aqal kale oo kubada cagta ah
Dad: Dareen weyn: tusaalihii hore ee TPMP wuxuu ka hadlayaa xilligii madow ee noloshiisa
Waa maxay sababta ay marnaba bixi doonaa naag kan ka badan 36? Rag baa muujiyay, waa saxariir
Carlos Ghosn mar kale ayaa lagu soo oogay Japan Isniintii